बढीजसो सिर्जना कार्यस्थलमै कोर्छु
राज रोबट अजनबी, संयोजक, प्रतिभा परिवार
२०३९ साल माघमा पिता स्वर्गीय रनहाङ थेबे लिम्बू र माता सलमती लिम्बूको कोखबाट कान्छा छोराको रुपमा जन्मिएका राज रोबट अजनबीको स्थायी बसोबास ताप्लेजुङको मामाङ्खे हो । याम्फुदिनको श्री कृष्ण प्राविबाट प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गरी याम्फुदिनकै कञ्चनजङ्घा निमावि र तेल्लोकको भैरुङ्गे उच्च माविबाट माध्यमिक शिक्षा पार गरेका रोबटले त्यो भन्दा अरु अध्ययन नभएको बताए । सानैदेखि साहित्यमा रुची रहेको बताउने रोबटले मलेसियामा रहँदा साथीहरुसँग मिलेर संस्थागत रुपमै धेरै साहित्य कोरेको स्मरण गरे । पहिले सङ्गीतमा लाग्ने कुनै सोच नभएको तर अहिले अचानक सङ्गीततिर लागेको बताउने रोबट अहिले साहित्यभन्दा सङ्गीतमै धेरै ब्यस्त छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्थापना भएको साङ्गीतिक समूह प्रतिभा परिवारका संयोजक समेत हुन् उनी । प्रतिभा परिवारले भर्खरै प्रतिभा–१ एल्बम विमोचन गरिसकेको छ । गीत, सङ्गीत र साहित्यकै सेरोफेरोमा रहेर उनीसँग गरिएको कुराकानी ।
नियमित डिउटीसँङ्गै गीत, सङ्गीत र साहित्यका काममै दैनिकी बितिरहेको छ ।
कतारजस्तो ठाउँमा बसेर गीत, संगीतमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
एकदमै जटिल छ । डिउटीमै १४ घन्टा बित्छ अरु आफ्नो दैनिकी कामहरु सकेर बचेको २ र ३ घन्टामा केही पनि गर्न सकिने अवस्था छैन, त्यसैले बढीजस्तो सिर्जनाहरु कार्यस्थलमै गर्ने गर्छु ।
भर्खरै विमोचित एल्बम प्रतिभा भाग १ कस्तो खालको एल्बम हो र यो एल्बममा संलग्न स्रस्टाहरु कहाँ कहाँका हुनुहुन्छ ?
प्रतिभा १ एल्बम विश्वमा छरिएर रहेका प्रतिभाशील मनहरुको एकीकृत दस्तावेज हो । लन्डन, मलेसिया, अफगानस्तान, साउदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत र नेपालबाट हामी सहभागी छौं ।
कसरी सम्भव भयो यो ग्रुप क्रेट गर्न ?
सामाजिक सञ्जालमा जोडिएपछि त्यहाँ हरेक व्यक्तिहरुको प्रतिभा देख्न र सुन्न पाइयो, प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क बढाउँदै लाने क्रममा लौ अबचाहिँ केही गरांै है भन्ने सबैको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिभा परिवार स्थापना गरिएको हो ।
प्रतिभा ग्रुपको भावी योजनाहरु के के छन् ?
हामीले सबैको सिर्जनाहरु कलेक्सन गरेर ब्याङ्किङ गर्ने सोच बनाएका छांै, यो हाम्रो दीर्घकालीन योजना हो । अहिले तत्काललाई भने प्रतिभा २ को तयारी गर्नतिर जुटेका छौं ।
सामाजिक सञ्जालबाट बनेको प्रतिभा ग्रुपको पहिलो प्रस्तुति एल्बम प्रतिभाले नेपाली गीत, संगीत बजारमा कस्तो प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ ?
जजसले प्रतिभा १ सुन्नु भो उहाँहरु सबैले अति राम्रो प्रतिक्रिया दिनु भएको छ, कतिले त पहिलो पटक प्रतिभा प्रस्तुत गरेका छौं यो एल्बममा । जस्तो कि मैले पहिलो पटक यसै एल्बममा सङ्गीत गरेको छु, केही गायिकाहरुले पहिलो पटक स्टुडियो फेस गरेका छन् । यो अर्थमा नयाँ भएर पनि हामीले परिपक्क सिर्जना पस्केका छौं ।
यो प्रतिभा एल्बममा किन प्रतिभामै संलग्न स्रस्टाले मात्र संगीत र स्वर भरेका हुन् ? यो तपाईहरुको क्राइट एरिया हो कि ?
यो क्राइट एरियाभन्दा पनि हामी नै सक्षम छौं भने किन बाहिरकोलाई बोलाउने भन्ने हो । बारी खन्नलाई परिवारकै सदस्यले सकिन्छ भने किन खेताला बोलाउनु ? भन्ने हो, हाम्रो परिवारलाई एउटा रेकर्डिङ स्टुडियो र एरेन्जरको मात्र अपुग छ, यो पनि बिस्तारै पूर्ति गर्दै लाने छौं ।
तपाईहरु कसरी यो क्षेत्रमा ईन्स्पायर हुनु भो ?
गीत, सङ्गीत, कला साहित्य बुझ्नेहरुको लागि यो एउटा लतजस्तै हो भन्छु म । यसको गहिराइ नाप्न मन लाग्ने तर कहिले नपुगिने अनन्त गहिराइ नै यो क्षेत्र भएको कारण अटोमेटिकल्ली इन्स्पाएर गराउँछ ।
अहिलेको विश्व साहित्यमा तपाईहरुको ग्रुपलाई कतिको प्रभाव पारेको छ ?
जरुर पारेको छ, साहित्यमा पनि एक किसिमले प्रधिस्पर्धा चलेको अवस्था छ । हामी सामाजिक न्याय हुने युगान्तकारी समतामूलक साहित्यले विश्व ओगटोस् भन्ने चाहन्छौं । वास्तवमा साहित्य जनहित र सामाजिक रुपान्तरणको लागि सधैं अग्रगामी हुनु पर्छ ।
तपाईहरुको ग्रुपलाई मिद्लिस्ट संगीतहरुले कतिको प्रभाव पारेको छ ?
कहीबाट प्रभावित हुनु र प्रभाव पर्नुभन्दा पनि हामी आफैंबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता परिवारको छ । हामीसँग आफ्नोपन छ मौलिकता छ । अहिलेका चर्चित साहित्यकार जानू काम्बाङ र राजा माबोको प्रत्येक सिर्जनाहरुमा मौलिकता पाउँछांै, यो गर्वको कुरा हो कि उहाँहरु दुबैजना प्रतिभा परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ । हामी अरु सिर्जनाहरुबाट मनोरञ्जन लिँदै आफ्नो मौलिक सिर्जना पस्किन अग्रसर हुनेछौं ।
तपाईहरुको यो प्रतिभा ग्रुपले गीत, संगीतको मात्र काम गर्छ कि अरु साहित्यको पनि काम गर्छ ?
हामी गीत, सङ्गीत मात्र होइन साहित्यमा पनि उत्तिकै बलियो छौं । विगत लामो समयदेखि साहित्य लेखनमा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरुको संलग्नता छ यो परिवारमा । मैले माथि नै भनी हालेनी चर्चित नारी गीतकार र साहित्यकार जानू काम्वाङ, युवा कवि राजा माबो तथा विगत लामो समयदेखि साहित्य लेख्दै र सङ्ग्रहित गर्दै आएका मलगायत सञ्जय राई छुच्चा, दिलीप राई सगर, इक्साहाङ चेम्जोङ देबिनबाबु राई र राज लम्साल हाम्रो यो साहित्यिक समूह नै यो प्रतिभा परिवारमा छौं, यसको अर्थ हो कि हामी साहित्यमा सशक्त छौं । यसका अलावा नाटक लेखन निर्देशन र अभिनय पनि यही परिवारबाट सम्भव छ ।
अचेल विदेशमा रहनेहरुले धेरै गीत, संगीतको मार्केट धानेको छ भन्ने भनाइ छ, यो बारेमा तपाईको कस्तो धारणा छ ?
यो एकदमै सही हो, यो सही कसरी पनि हो भने मैले अहिलेसम्म जति गीतकारको गीत, सङ्गीत गरे ती सबै गीतकार देश बाहिरबाट हुनुहुन्छ । पहिलेको जस्तो एल्बम गरेर व्यावसायिक लाभ लिन सकिने अवस्था अहिले नरहेको कारण पनि नेपालभित्रका सर्जकहरुले लगानी गरेर गीत रेकर्ड गराउन नसकीरहेको अवस्था हो झंै लाग्छ केही अपवादबाहेक ।
तपाईले निक्कै गीतहरुमा संगीत भर्नु भएको रहेछ, संगीत शिक्षा कहाँ र कोसँग लिनु भो ?
मैले कहींकतैबाट पनि सङ्गीत शिक्षा लिएको छैन र सङ्गीत विज्ञहरुसँग पनि परामर्श लिएको छैन । अचानक यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । सङ्गीत गर्ने मेरो कुनै योजना थिएन, मलाई लाग्छ सङ्गीत सिकेर सकिने अध्याय वा पाठ्यक्रम होइन । यो त फिलिङ्स हो, आफ्नै फिलिङ्सभित्र सङ्गीत भेटिन्छ ।
कतार बस्नुभएको कति भो र कतारमा नेपालीहरुको रहनसहन कस्तो छ ?
म २०१२ देखि कतारमा छु । यहाँ प्रायःजसो अदक्ष नेपाली कामदारकै ठूलो संख्या छ, यो मध्यपूर्व देशभित्र पर्छ यहाँ ५५ डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्छ । त्यसैले हावापानी हाम्रो लागि सहज छैन तर स्वदेशमा रोजगारी नभएको अवस्था रहेकोले यहाँको जटिल परिस्थिति सहनु हाम्रो बाध्यता हो ।
अब अन्त्यमा मैले सोध्न भूलेको र तपाईलाई भन्नु पाएहुन्थ्यो जस्तो लागेको केही कुरो छ भने भन्न सक्नु हुन्छ ?
यहाँ मेरो भनाइ राख्ने यो सुनौलो अवसरको लागि तपाईलगायत पुरै मिडिया टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । र, हाम्रो प्रतिभा परिवार सङ्गीत सेवामा समर्पित परिवार हो । हामीले व्यवसायिक लाभको लागि काम गरेका होइनांै, त्यसैले हाम्रो पाइलाहरुमा सङ्गीत तथा साहित्यानुरागी र मिडियाले साथ दिने छ भन्ने आशा राख्दछु ।